श्रीमतिलाई खुल्ला पत्रः बुढी, आजबाट म शन्यास लिन्छु है ?::Best News Experience from Nepal
सर्व प्रथम त, हेर बुढी तँलाई ब्या गरेको यतिका वर्ष पछि पहिलो पटक ले तेरा खुट्टा, शिर नुहुराएर ढोई दिुन्छु । र, यति डर लाग्दो हतियार जस्तो अधिकार पाएकोमा बधाई पनि दिन्छु । आज भदौ एक गते बिहान तँ र म विस्तराबाट उठेर चिया पियौं । त्यस पछि म बाहिर निस्कें । सदा झै घर पिएको चियाले मेरो चित्त बुझ्दैन । म बजारमा सदा पिउने चिया पसलमा पुगे ।
तलाई मलाई थाहै छ , हाम्रो सानैमा विवाह गराई दिए तेरा मेरा बाउ आमाले । श्रीमान श्रीमति भन्ने के हो र हामी बिच के गर्नु पर्छ भन्ने पनि हामी दुबैलाई थाह थिएन । हामी केटा केटी झै लड्ने चल्ने गथ्र्यौं । त्यही भएर पनि तिमी भन्दा पराई जस्तो लाग्छ ।
वालापन मै त्यसरी जवरजस्ती हामीलाई सुत्न लगाउने विरुद्धको अत्यचार पनि हामी सहयौं, भोग्यौं । त्यस्तै तँ तेह्र कि म चौधको थिएँ होला हेर राक्षश ( सरी है हिजो साँझ सम्मको तँ संग बोल्ने बानी भएकोले राक्षस शव्द खुस्की हाल्यो, आज देखि लागु हुने कानुनमा लागु नहोस प्लीज….)
त्यो भन्दा पनि डर तेरै छ बाय । कहिले काँही झगडा पर्ला । रिसले चुर तैले अर्को दिन बिहानै प्रहरीमा आएर जवरजस्ती करणीको मुद्धा ठोके मरो हालत के होला ? तैले छाडी, बरु हाम्रो कोठा अलग अलग बनाऔं । त्यो भन्दा अझ मैले सांसरिक ईच्छा आकंक्षाबाटै शन्यास लिई दिन्छु खिस्सै खतम । तैले त्यसो गर्न दिन्नेस् जस्तो लाग्छ । त्यसो भए केहि सर्तहरु जो यस प्रकार छन ।
२– आज मिति … को साँझ देखि बिहान घरबाट निस्कीने बेला सम्म म उहाँकी श्रीमति शकुसल र सुरक्षित छु भन्ने कागज पनि दैनिक गराउनु पर्छ । त्यसमा हामी दुवै वादी प्रतिवादी औठाछाप लगाउनु पर्छ , भोली यो हस्ताक्षर मेरो होईन भन्न पो के बेर हुन्तो ?